TRAVOS - SO
Travos AB cwaxay shaqeyyneysaa Arbetslivssupport i Östergötland AB.
”Waxaan mar walba la kulmaan macaamiisha la dareenka ah in qancinta macaamisha war walba loo baahan yahay in la dhaafo”
Ku soo dhawoow Travos AB!
Hadafkayagu waa in la caawiyo dadka dhalinyarada ah, ardayda, muddo dheer soo galootiga shaqo cusub in uu ka tago shaqo la'aanta iyo isu adkeeyo si deg deg ah suuqa shaqada.
Ujeedadeena waa ganacsiga waa inay ka qayb qaataan horumarinta aqoonta caalimiga jilaa iyo saamayn suuqa shaqada ee Iswiidhan si ay uga faa'ideystaan aqoon gaar ah qof walba iyo fursadaha!
Waxaan la shaqayna shirkadaha, hay'adaha samafalka iyo degmooyinka kala duwan u shaqeeyaan si ka caawiyo ka qaybgalayaashadeena dhexgalaan ee Iswiidan, iyo si ay isu la dhiso si deg deg ah suuqa shaqada.
Falsafadkeena waa in had iyo jeer ka fikirto iyo ka hor, sidaas darteed, waxaynu og nahay in aan abuuro qiimaha ku daray for macaamiisheena.
Waxaan ku dadaaleynaa in ay mar walba noqon sida wax ku ool ah intii suurtogal ah, Dhaqaale, muddada iyo tayada.
Xafiiskeena wuxu ku yaala Nacka.
Wada shaqyn, iskaashi iyo isku xirka.
Waxaan qaabeeyo shaqadayada sida soo socota:
• Jawaab oo xirfadeed.
• A baaritaanka asalka xirfadeed.
• Qorshaynta wadajirka ah.
• Gaarka ahin qabashada macluumaadkaaga shakhsiyeed.
• Tababaridda sida ay ”STRIDE MODEL”
• Isku aaddinta sida ay ” Flow Model of Coaching”.
• Dabagalka ee hormarka shaqada.
Taageero iyo aaddinta
Taageero iyo ku habboon waa adeeg loogu talogalay kuwa u baahan yihiin taageero si gaar ah loogu talo galay in shaqo raadinta. Taageerada aad hesho waa labada qalabka raadinta shaqada iyo caawimo si ay ula xiriiraan loo shaqeeyaha.
Waxaan kuu soo bandhigi soo socda
• Aqoonso xirfadaha qaybgale ee, xirfadaha, shuruudaha iyo meelaha xirfadeed
• Taageerada helo iyo Boogaadin shaqo
• Taageerada abuuro waraaqaha codsiga
• Dabagal ku horumarka shaqada
• Xiriir la shaqeeyayaasha
• Dadka shaqo doonka ah goobjoog loo shaqeeyaha leh baahida shaqada
• Hawlo Goobta la xiriira
• Tababarka Waraysi iyo diyaarinta wareysiga shaqada
• Haanun iyo latalinta (HAWL KHASAB AH)
• Macluumaad ku saabsan waxbarashada iyo gargaar doonaya waxbarashada
• Xiiso wada hadalka
• Hawlo wada shaqeeyn
• Koorsooyinka kumbuyturka
• Koorsooyinka luqadda
• Macluumaadka bulshada
• Waxbarasho gaaban
Si aad u timadid xaafiskeena, waxaad u baahan tahay inaad la hadasho xafiiska shaqada, oo qiimeynaya haddii aad xafiiskeena laguu oggol yahay.
Stockholm, Ku qor nambarka soo socda: KA 10049944
Arvika, Ku qor nambarka soo socda: KA 1005 39 64
Afarta kooxaha hanuuninta bulshada ka kooban siddeed maadooyinka sida soo socota:
Si aad u hesho noo, waa in aad iska diiwaan via link soo socda:
Vkhubarodeena shaqo waxaa laga heli karaa aad kuwa shaqo doonka iyo idinku wadi doonaa si ay u helaan on inay shaqada si. Ka hor inta noo doorashada, waa in la siiyaa aad go'aan ay la-taliyaha xirfadda ka degmada Nacka in aad xaq u leedahay dadaal suuqa shaqada this. Markaas waxaad dooran khabiir shaqo kuwaas oo adiga kugu habboon ka.
Xafiiska fursadaha - Tababaraha shaqada (Sollentuna)
Ku soo dhawoow!
Waxaa nala waxaad ka heli kartaa tababarka shaqada, imtixaanka shaqada iyo tababarka shaqo. Waxaan kaa caawin doona dadaalada kala duwan si loo fududeeyo gelitaanka suuqa shaqada.
Nala soo xiirir
Hawlaha aad naga hesho:
A. Aqoonso xirfadaha qaybgale ee, xirfadaha, shuruudaha iyo beeraha xirfadeed.
B. Taageerada helo iyo Boogaadin shaqo
C. Taageerada abuuro waraaqaha codsiga
D. Dabagal ku horumarka shaqada
E. Xiriir shaqeeyayaasha
F. Shaqo goobjoog doonka ah loo shaqeeyayaasha leh baahida shaqada
G. Barnaamijka tababarida
H. Goobta la xiriira- tababarka Waraysi I. iyo diyaarinta wareysiga shaqada iyo Hanuun mustaqbalkiisa
K. Warbixin ku saabsan waxbarashada iyo gargaar doonaya waxbarashada
L. Mintidnimada hawlaha
M. Xiiso wada hadalka
N. Haanun iyo latalinta
O. Siminaaradii waxbarashada
P. Koorsooyinka kumbuyturka
Q. Koorsooyinka luqadda
R. Macluumaadka bulshada
S. Waxbarasho gaaban
Yaa taageero ka khabiir shaqo ka heli kartaa?
- Dadka da'da yar ee da'doodu u dhaxeyso 18 iyo 24, kuwaas oo ka mid ah shaqada iyo waxbarashada u dhaxeeya
- Dadka qaata kaalmada dhaqaale
- Waayo, kuwa ku nool Nacka ama Sollentuna oo shaqo la’aan
- Waayo, kuwa ku nool Nacka leh xirfadaha luqadda yar Swedish iyo shaqo la'aan:
a. Qofka waddanka kuu cusub oo ubahan guurey wuxu hoos yimaadaan Sharciga Dhismaha iyo xaq u leedahay in dadaalka aasaaska ee xafiiska shaqada.
b. Dadka, ka dib markii muddo ah aasaaska laba sano, weli xirfad la'aanta xagga luqadda iswidhishka oo ka baxsan suuqa shaqada.
c. Qoyska ma hoos yimaadaan Sharciga ee Dhismaha.
D. Barnaamijka tababarida
H. Goobta la xiriira- tababarka Waraysi iyo diyaarinta wareysiga shaqada
J. Latalinta iyo Hanuun mustaqbalka
K. Warbixin ku saabsan waxbarashada iyo gargaar doonaya waxbarashada wicitaanada
R. Macluumadka Bulshada
- Haddii aad tahay shaqo la'aan oo ka diiwaan gashan Sollentuna, aad fursad u leeyihiin inay booqdaan Xafiiska Fursadaha guryaha furan, Salaasada iyo Khamiista inta u dhaxaysa 13.00-15.30.
- Xafiiska fursadaha shaqo la'aanta waxaa loola jeedaa 16 sano kuwaas oo u baahan taageero isku-filnaanshaha. Inta aanad ah tababaraha / mentor, waad samayn doonaa baadhitaan si wadajir ah ula Xafiiska Fursadaha ah halka aad ka heli doonaa oo mid adiga kugu habboon.
- Haddii aad u aragto xafiiska fursadaha ah in aad xaq u leedahay in tababare / hagid aad nala soo dooran.
Kooxda 1: Dalka cusub ee Iswiidan
Inay u yimaadaan Iswiidan
Ku noolaanshaha Iswiidan
Si ay u daryeelaan caafimaadkooda ee Iswiidan
Kooxda 2: Shaqada iyo waxbarashada (18 saacadood)
Si loo taageero iyo horumarinta ee Iswiidan
Block 3: Demokrati (15 timmar)
Xuquuqda Qofka iyo waajibaadka
Si aad saamayn in Iswiidan
Kooxda 4: Caruurta iyo Qoyska
Si ay u sameeyaan qoyska iyo carruurta dalka Iswiidan ku nool
Si aad u da ee Iswiidan
Manhajka loo eegi doonaa dhinacyada soo soocda:
A. Heshiisyada UN ee xuququuda insaanka.
B. Xuququuda carruurta.
C. Kala duwanaanta.
D. Halka waxbarashada waa in lagu fuliyaa hab in dadka noocyada kala duwan ee maskaxda, neuropsychiatric iyo itaaldarrida jirka iyo socdaalka la xiriira caafimaad darro ay sidoo kale ka qayb qaadan kartaa siman ah.
Waxbarashada waa in lagu daboolo 69 saacadood. Waayo, kaasoo qeybgalaha, hanuuninta bulshada waa in la isku daro shaqada, waxbarashada iyo hawlaha kale si loo dedejiyo samaynta nolosha shaqada. Waxaan bixinaa hanuuninta bulshada galabtii, galab, fiid iyo todobaadkan sida ay soo socda lix daydo:
Jihaynta bulshada waxaa in la siiyo 3 maalmood toddobaadkii at 4 saacadood maalintii muddo 6 todobaad - halkaas oo aanu sidoo kale ka mid noqon kara qaladaad dabcan.
Orientation bulshada waa kooras ku adiga oo ah qof waddanka Iswiidan ku cusub oo rabo in aad naftaada dhisato. Koorsooyinka wexey ka kooban yihiin qaybo kala duwan in la xoojiyo aqoontaada ku saabsan bulshada dalka Iswiidan.